Muuri News Network » WAR CUSUB: C/weli Gaas oo si Jees jees ah Yaabna leh kaga hadlay Shirka Turkiga.
WAR CUSUB: C/weli Gaas oo si Jees jees ah Yaabna leh kaga hadlay Shirka Turkiga.
Madaxweyne C/weli Gaas ayaanan ka qeyb galin shirka maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, shirkaasi oo ay daah fureen maanta madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga isagoona si jeesjees ah ugu duulay magaalada Washington ee dalka Mareykanka.
C/weli Gaas, oo wareysi siiyay mid kamid ah wargeyska dalka Ethiopia ayaa sheegay in shirka magaalada Istanbul uusan aheyn mid dani ugu jirto Puntland sidaas darteedna Umada Soomaaliyeed lagu jahawareerinayo.
Madaxweyne Gaas ayaa ku sugnaa dalka Ethiopia, iyadoo dhegta wax loogu sheegay, waxaana horey u diidanaa natiijada shirkii ka dhacay Muqdisho ee lagu shaaciyay doorashada Soomaaliya nooca ay noqoneyso taasoo leesku raacay 4.6-ka.
Shirka istanbuul Waxaa ka qeyb galaya madaxweynayaasha Jubbanland, Galmudug, Koofur Galbeed